March 23rd, 2014 Xiriirka Ciyaaraha Fudud oo ku shirey Dubai + Sawirro
Kulan looga hadlaayay horumarinta iyo qorshe-sanadeedka 2014 – 2016 ee Xiriirka Soomaaliyeed ee Cayaaraha Fudud ayaa lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Imaraadka Carabta,iyadoo xubno katirsan GOS lagu casuumay shirkaasi.
March 1st, 2014 Maanta vs Bari iyo Kulamada ugu adag Horyaalada ENG,,Italy vs Spain……….
aan ku horeyno Horyaalka Ingiriiska vs Lugta 28 Sabti 1-3-2014 Fulham oo ugu Hooseysa Horyaalka ingiriiska 2013-2014 isla markaana leh 21` dhibcood ayaa qaabileysa kooxda Hogaamineysa Horyaalka ee Chelsea oo
February 23rd, 2014 Madaxweynaha Chelsea oo ku amray Didier Drogba inuu Chelsea ku soo laabto wa maxay sababta
Chelsea ayaa dooneysa in Didier Drogba ay dib ugu soo celison kooxda macalin ahaan ee ma ahan inuu u ciyaari doono ciyaaryahanka Ivorian kadib labo sano uu ka maqnaa Stamford
February 20th, 2014 Kooxdii Soomaaliya ku matashay tartanka Cayaaraha Qaboobaha Aduunka oo Stockholm lagu soo dhaweeyey
February 20th, 2014 Fly Emirates vs Sansiro oo lagu Garaacay Naadiyada Arsenal vs Ac Milan
Garoomada Fly Emirates vs Sansirowaxaa Xalay lagu legday Lugta 16ka ee Champions ligaue Naadiyada Arsenal iyo Ac Milan ka dib Markii ay 0-2 iyo 0-1 ay uga kala badiyeen Kooxaha
February 18th, 2014 Mesut Ozil oo sheegay inuu wacdaro soo bandhigi doono kulanka Habeen dambe
February 18th, 2014 Daawo Sawirada Xiddigaha Barcelona iyo Kuwa City oo ku tababar qaadanaya garoonka Etihad.
February 18th, 2014 Daawo sawirada PSG oo isu diyaarineysa kulanka Xiisaha iyo Xamasada leh ee caawa
Kooxda PSG oo xagaagii hore ku soo hartay wareega Siddeed dhamaadka ayaa caawa la ciyaareysa lugta koowaad ee Champions league kooxda Germany ee Bayer Leverkusen. Blanc kooxdiisa ayaa ku dadaaleysa
Kulanka ay habeen dambe kooxdiisa garoonka Emirates kula cayaari doonto Bayern Munich ayuu ku sheegay Ozil inuu yahay kulan xiiso gaar ah u leh isaga . “Waxaa la joogaa xiligii
February 12th, 2014 Jose Mourinho waa in uu katago Cole Chelsea
Daafaca Heerka Caalami ee England ayaa waxa dhamaan raba heshiiskiisa uu kujoogo hatan kooxda chelsea waxana lala xiriirinaya kooxda kadhisan Wadanka Maraykanka ee RED PULLS Ee ka ciyaro Theiry Henry waxana uu